पुरुषको स्तन बढेर हैरान ! यस्तो तेलले महिलाको जसरी पुरुषको स्तन बढ्ने रहेछ | Rajmarga
पुरुषको स्तन बढेर हैरान ! यस्तो तेलले महिलाको जसरी पुरुषको स्तन बढ्ने रहेछ
के लैभेन्डर र चियाको विरुवाको तेलका कारण युवकहरुको स्तन असामान्य रुपले बढिरहेको छ ? एउटा अध्ययनका अनुसार यो तेलमा आड यस्ता केमिकल हुन्छन् जसले हाम्रो हर्मोन्समा महत्वपूर्ण दखल दिने गर्दछ ।
पुरुषको स्तन असामान्यरुपले बढ्ने रोगलाई गाइनेकामस्टिया भनिन्छ । अस्ट्रोजन हर्मोनका कारण पुरुषको स्तन बढ्दछ र यो एक अपवाद हर्मोन हो । यो तेलको प्रयोग गर्नेहरु र युवाहरुको बढ्दो स्तनका बिच सम्बन्ध खुलासा भएको हो ।
एउटा अमेरिकी अध्ययनमा पाइयो कि यो तेलमा केही यस्ता केमिकल हुन्छन् जसबाट ओस्ट्रोजन र टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्ने गर्दछ ।
विरुवासँग सम्बन्धित तेल कयौ उत्पादनमा पाइन्छ । साबुन, लोशन, स्याम्पु र कपालमा लगाउने उत्पादनमा यी तेलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।यसका साथै यसको प्रयोग सफाईसँग सम्बन्धित उत्पादन र औषधिमा पनि गरिन्छ ।
उत्तरी कैरलाइनामा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरनमेन्टल हेल्थ साइन्स (एआईईएचएस) का बरिष्ठ शोधकर्ता टायलर रेम्जीले भने कि यो तेलको प्रयोगदेखि सतर्क रहनु जरुरी छ।
उनले भने–मानिसहरुलाई लाग्दछ कि यो जरुरी तेल सुरक्षित छ, जबकि यसमा कयौ प्रकारका केमिकल हुन्छन् । स्पष्ट छ, हामी यो तेलको प्रयोगका विषयमा सावधान रहनु पर्दछ ।
यसमा कयौ यस्ता तत्व छन्, जसबाट हर्मोन्समा असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ । हालैका वर्षहरुमा पुरुषको स्तनमा असमान्य रुपले वृद्धिको गुनासो बढेको छ। यस्तो गुनासो विभिन्न मुलुकमा आइरहेको छ।
यो गुनासोका बिच मानिसहरुको खानपानसँग सम्बन्धित बानी र उत्पादनको जाँचमा यो तेलको प्रभाव देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको हो । कतिपय घटनामा यस्तो पनि देखिएको छ कि मानिसहरुले यो तेलको प्रयोग बन्द गरे, तब उनीहरुको बढ्दो स्तन नियन्त्रणमा आउन सहयोग पुग्यो ।
यसअघि भएको अध्ययनमा लैभेन्डर र चियाको विरुवाको तेलबाट पुरुषको हर्मोनमा परिवर्तन भइरहेको पुष्टि भएको थियो । यसको असर युवाहरुको यौवनमा स्पष्ट पर्दछ ।
एउटा नयाँ अध्ययनका अनुसार तेलमा आठ मुख्य केमिकल पाइन्छ । यी तेलबाट टेस्टोस्टेरोन र ओइस्ट्रोजेन हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ ।
शोधको रिपोर्टका अनुसार–लैभेन्डर र चियाको विरुवाको तेलमा यस्तो केमिकल हुन्छ, जसलाई लिएर मानिसहरु बेपरवाह रहनु आवश्यक छैन । यहाँसम्म कि ६५ अन्य प्रकारमा तेलमा पनि यस्तो केमिकल हुन्छ, जसबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको आशंका रहन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजका प्रोफेसर इआन हफेजले भने–अब यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ कि यी तेलमा पाइने केमिकलले ब्रेस्टको टिश्यु बढाउँछ । एन्टी मेल हर्मोनबाट पुरुषको शरीरमा यसप्रकारको परिवर्तन हुने गर्दछ । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: गायक रमेश गोरखाली र रचु थापाका “बत्ति झै बलेकी ” भिडियो सहित
Next post: ‘उही खोलीमा पानी’ टिमले काट्यो केक